Wondershare Software na-agba mbọ iji chedo nzuzo gị. Anyị ga na-anakọta ozi gbasara gị maka kọwaa nzube. Anyị na-adịghị kesaa ma ọ bụ ịkọrọ gị onye ọmụma gabiga ihe bụ nditịm mkpa iji mezuo anyị ọrụ gị. Anyị nwere ike ịkọrọ gị ihe ọmụma nanị na mmekọ ndị rube Wondershare si ikpuchido nzuzo gị. Wondershare Software agaghị ere onwe gị ozi n'ụzọ ọ bụla bụla.
Ihe ọmụma na-anyị na-anakọta? Gịnị ka anyị na-eji ya maka?
Mgbe ị na-edebe ihe iji na website anyị, gị zuru aha, adreesị ozi, adreesị nzipu ozi, nọmba ekwentị, nọmba kaadị akwụmụgwọ, na kaadị ngafe ụbọchị ga-achọrọ. The na-eji ozi mezue azụmahịa na-enyere anyị aka inye mma nkwado na ọrụ gị.
Olee otú ndị 3rd otu kaadị processors chebe ahịa si ọmụma?
Wondershare Software eji ala na ihe nkesa kwadoro site SWREG na ndị ọzọ na 3rd otu kaadị processors na encrypt niile ndị ahịa si onye ọmụma tupu ọ na-zitere anyị, gụnyere aha, adreesị, nọmba kaadị akwụmụgwọ, kaadị ngafe ụbọchị, wdg izo ya ezo na-arụ ọrụ iji gbochie ọ bụla obi ojiji nke ozi nkeonwe gị. Kaadị akwụmụgwọ gị ozi bụ naanị eji maka online mgbanwe.
SWREG bụ elu ala online ugwo ọrụ maka software registration na kemgbe na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na 1987. Wondershare Software eji SWREG iji nye gị nnọọ ala na ngwa ngwa online zụọ.
Iji mma ịghọta ihe ọrụ dị bara uru ahịa anyị, anyị na-eji "kuki". A kuki bụ obere ederede faịlụ na a weebụsaịtị na-ede na draịvụ ike gị. Kuki na-arụ ọrụ dị ka gị njirimara kaadị na ike idekọ okwuntughe, mmasị na ịzụrụ. Kuki ka ibe weebụ nkesa mara na ị laghachiri na saịtị a. Kuki nwekwara ike chọpụta ozi ndị ọzọ, dị ka kwa ụbọchị ọbịa ka anyị website na peeji nke nke saịtị ọtụtụ ugboro ugboro gara. Kuki ndị pụrụ iche na naanị ike na-agụ site nkesa na nyere ha. Ha nwere ike ghara gburu ya dị ka koodu ma ọ bụ nyefee nje.
Ị nwere ike ịgbanwe ntọala na ihe nchọgharị gị iji gbochie kuki ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ka a kuki set mgbe ị gara na anyị website. Otú ọ dị, site na-eme otú ahụ, ị ​​nwere ike ọ gaghị zuru ohere nile na ibe weebụ.
Ego Ọgwụgwụ User License Agreement >>